Weebly: A Dị Mfe Dị Mfe n'Hostingntanet Bochum na CMS | Martech Zone
Weebly: Ebe Dị Mfe Dị Mfe na Bochum na CMS
Wenezdee, Machị 31, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Mgbe enyi m Jenni gwara m na otu enyi ya gwara ya ka ọ malite websaịtị Obi ọjọọ, a free mba ọrụ na ọdịnaya management usoro (CMS), M n'ezie nyere ya ike oge. Naanị m maara na m ga-arụ ọrụ abalị niile iji mejuputa ọmarịcha saịtị ahụ nke enyere ya site na Akaụntụ Akaụntụ, a email outsourcing gị n'ụlọnga.
Ahụmịhe Weebly nwere bụ nke dị iche! Enwekwara m ike idetuo na mado HTML na CSS, jiri Weebly mee ka ọ dị mfe iji dochie eriri (dịka ọmụmaatụ, etinye ọdịnaya na %% CONTENT %%), ma bulite faịlụ ahụ site na njirimara ọrụ ha dị mfe.
Idezi ọdịnaya bụ Dezie Na Ebe sistemụ ụdị - ihe nke usoro njikwa ọdịnaya ọ bụla kwesịrị itinye. Nke ahụ bụ, ọ na - enye gị ohere ịmegharị ihe na gburugburu peeji ahụ ka ị wee hụ ihe ọ dị. Ọ dịghị mkpa ka ịhụchalụ ma ọ bụ laghachi na-apụta na-emezi. Ihe oyiyi ihe oyiyi ahụ debere ihe oyiyi ahụ metụtara saịtị ahụ ma debe otu aha ihe oyiyi ahụ, n'ihi ya enweghị m ịmekwu ihe.
Nsonaazụ dị ịtụnanya. Enwere m ike ịmepụta saịtị ọkachamara n'ihe gbasara 30 nkeji ma ọ bụ karịa. Enwere m afọ ojuju! Na oke nhọrọ nke ederede, ụdị, mgbasa ozi agbakwunyere na nhọrọ ọdịnaya, ịkwesighi ịbụ ọkachamara iji wulite weebụsaịtị gị. Enwekwara akaụntụ pro dị na ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ (na iwepu njikọ Weebly n'okpuru).
Were a anya Indy onye nkiri ma debanye aha maka akwukwo ozi ha!
Tags: indy onye nkiriwee jirikwa ya
Mkpebi nyocha OpinionLab na Nnwale
Kedu ihe kpatara na ị nweghị ike idetuo Amazon.com
Apr 1, 2010 na 7: 35 AM
Saịtị dị ịtụnanya! Amaghị m na Weebly nwere ike ụdị nsonaazụ ndị ọkachamara dị otú a… n'agbanyeghị, ọ dịghị mgbe m kpafuru gafee ndebiri enyere.
Apr 1, 2010 na 8: 02 AM
Obi dị m ụtọ inye gị ụfọdụ fodder blog na enweghị m nkà na ụzụ! Daalụ maka enyemaka gị!
Obi dị m ụtọ ịnụ Weebly ji rụọ ọrụ nke ọma maka gị! Anyị ga-enwekwu ọ happyụ ịnụ nzaghachi ọ bụla i nwere.
Sep 28, 2011 na 9: 31 AM
Enwere ụzọ iji gbanwee n'etiti koodu na imewe na ihe ndị etinyelarị na peeji ahụ?
Sep 28, 2011 na 3:24 PM
Eeh, ha nwere ndozi di nma di nma n’ebe oru. Ọ nweghị ihe dị oke mgbagwoju anya, mana ọ dị mma maka saịtị.